I-alumina e-alumina ceramic gear gear China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > Ingxenye yeCeramic yoMkhumbi Wokupheka > I-alumina e-alumina ceramic gear gear
I-Model No.: JH.CGS.002
Senza umthamo we-alumina ceramic gear gear for pepper, spice noma chilly grinder ngaphezu kweminyaka engu-12. Ngenxa yama-95% alumina ne-steaite yizinto ezifanelekayo, isetshenziswa ngaso sonke isikhathi njengento eluhlaza.
Njengamanje, sinezinhlobo ezijwayelekile zohlobo olujwayelekile ukuze uvumelane nomklamo ohlukile. Kulula ukuthola okufanele noma okufanayo ukuvumelanisa amadivayisi wakho wamanje. Ngaphandle kwalokho, sikwazi ukwakha noma yiziphi ezinye izingcwecwe zokugaya nge-ceramic ngamaklayenti 'kanye namakhasimende akhethiwe noma imfuneko.
Ngenkambiso yethu enobuchwepheshe kanye nekhwalithi ekwaziwayo nokulawula, sinegama elihle elivela kumakhasimende aseYurophu, aseNingizimu Afrika nase-Asia. Kuze kube manje, umthamo wethu wokukhiqiza we-ceramic grinder ungafinyelela amakhulu ezinkulungwane ngonyaka.
I-AL2O3 I-Ceramic Gear Gear